‘कहिलेकाही तेल सकिएर पनि दियो नीभेको हुन सक्छ, हरेक समय हावा मात्र दोषी हुँदैन’ – " सुलभ खबर "
‘कहिलेकाही तेल सकिएर पनि दियो नीभेको हुन सक्छ, हरेक समय हावा मात्र दोषी हुँदैन’
काठमाडौ। पुर्व युवराज पारश शाह अहिले समाजिक संजालमा सक्रिय देखिन्छन् । उनले फेसबुकबाट आफू रमाइरहेको फोटोहरु सार्वजनिक गर्छन् । साथै, राष्ट्रियता र पारिवारिक विषयलाई उनले फेसबुकमा प्राथमिकता दिइरहेका छन् । एक लाख बढिले लाईक गरेको पारश शाहको फेसबुक पेजमा उनका निजी तस्बिरहरु सार्वजनिक हुन्छन् जस्ले गर्दा पनि उक्त पेज पारशकै हो भन्ने अडकलबाजि लाउन सकिन्छ ।
उनले आज (शनिबार) फेसबुकमा लेखेका छन् ‘सबै मान्छे को मन धमिलो हुदैन, सबै मान्छे नराम्रा हुदैनन्, कहिलेकाही तेल सकिएर पनि दियो नीभेको हुन सक्छ, हरेक समय हावा मात्र दोषी हुदैन ।’ पछिल्लो समय निरन्तर नकारात्मक समाचारको सिकार बनेका पारशले आफूलाई नराम्रो भन्नेलाई वास्तविकता बुझेरमात्र बोल्नुपर्ने संदेश दिन खोजेका छन् ।
सबै मान्छे को मन धमिलो हुदैन ।।सबै मान्छे नराम्रा हुदैनन् ।।कहिलेकाही तेल सकीयर पनि दियो नीभेको हुन सक्छ ।। हरेक समय हावा मात्र दोषी हुदैन ।। ??
تم النشر بواسطة ‏‎Paras Shah‎‏ في السبت، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩
मोडल तथा भिजे सोनिका रोकायासँग नजिकिएका पारश पछिल्लो समय निरन्तर मिडियामा आईरहेका छन् । उनका क्रियाकलापले अहिले समाजिक संजाल भरिएको छ । कहिले जादु भन्दै आगो बल्ने पर्शमा आगो बालेको त कहिले शोनिकालाई पिङ खेल्न मद्धत गरेको दृश्यहरु समाजिक संजालमा आइरहेका छन् । सोनिकाले पनि पारश राम्रा मान्छे हुन् भन्ने संदेश दिइरहेकि छिन् । उनले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट पारशको विभिन्न पक्षहरुलाई देखाइरहेकि छिन् । उनी धेरै जसो समयनै पारशको वास्तविक छवि र समाजले बनाएको छविका बारेमा चित्रण गर्ने गर्छिन् । सोनिका र पारश दुवैले वास्तविक पारशलाई बुझ्न आग्रह गरेकै हुन् त ? जवाफ पाठकमाझ छ ।